पर्यटन विकासको पूर्वाधार ‘सरसफाई’ | Jwala Sandesh
पर्यटन विकासको पूर्वाधार ‘सरसफाई’
| प्रकाशित मितिः मङ्लबार, चैत्र ४, २०७६ ::: 306 पटक पढिएको |
नेपालको आर्थीक विकासहरु मध्येको मुख्य एउटा स्रोत भनेको पर्यटन हो । नेपालले सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको नारालाई साकार बनाउनका लागी सम्पुर्ण तहबाट सामाजिक, आर्थिक तथा साँस्कृतिक विकास हुन जरुरत छ । आर्थिक विकासलाई हेर्ने हो भने वितेका ३ बर्ष लगातार नेपालको आर्थीक बृद्धिदर ६ प्रतिशत भन्दा बढीले बढेको छ । प्रतिब्यक्ति आयमा पनि २०१७ को तुलनामा २०१९ मा १५ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । कुलग्रर्हस्थ उत्पादन २०१९ मा ३४ खर्ब ६४ खर्व छ । जुन २०१७ को भन्दा १८.३९ प्रतिशत ले बढी हो ।
अन्तराष्ट्रिय मुद्राकोषको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार १९४ देश मध्ये नेपालको प्रतिब्यक्ति आयको बृद्धिदर राम्रो र कुलग्रर्हस्थ उत्पादनमा सुधार भएको छ । यसरी देशको आर्थिक विकासको आँकडालाई हेर्ने हो भने नेपालमा लगभग ३ करोड जनसंख्या भएको देशमा ३२ लाख बढीले आफ्नै संस्था खोली आर्थिक कारोबार भएको देखिन्छ । यो राम्रो अंक हो । यस्तै नेपालको अर्थिक विकासको बारे राष्ट्रिय आर्थिक सर्वेक्षण २०७५ का अनुसार ४ अप्रिल २०१८ सम्ममा नेपालका सबै ७५३ स्थानिय तहमा ९ लाख २३ हजार ३ सय ५६ आर्थिक कारोबारो गर्ने संस्था रहेका छन् । यस मध्ये ४ लाख ६२ हजार ६०५ निकायहरु कुनै सरकारी कार्यलायमा दर्ता भइका छन् भने ४ लाख ६० हजार ४ सय २२ दर्ता नभइ सञ्चालनमा आएका छन् । यस्ता निकायहरु आफ्नै घरमा ४ लाख ८ हजार ४८ भाडामा ४ लाख २६ हजार ३ सय ८०, र ३४ हजार १ सय १ सडकका पसल रहेका थिए ।
यो सर्वेक्षण अनुसार कुनै न कुनै रुपमा आर्थिक क्रियाकलापमा उपस्थित ब्यक्तिहरुको जम्मा संख्या ३२ लाख २८ हजार ४५७ रहेको छ । यसमा विभिन्न क्रियाकलाप गर्नेको संख्या रहेको छ । जस्तै होटेल, फेन्सी, कपडा, हार्डवयर, खद्यान्न, इलेक्टोनिक, कृर्षि फार्म, होमस्टे, र अन्य घरेलु, साना, मझौला तथा ठुला उद्योगहरु पर्दछन । नेपाल सरकारको सुखी नेपली समृद्ध नेपालको लक्ष्य पुरा गर्नका लागी २०२० सरकारको मुख्य बर्ष रहेको छ । यसरी पर्यटनको क्षेत्रको विकासका लागी यातायत, आवास, शिस्टाचार शैली, संस्कार ब्यवहार र सरसफाई स्वच्छता लाई पनि ध्यान दिन आवश्यक छ ।
मानिस बाँच्नका लागी अति आवश्यक भनेको हावा र पानी हो । त्यसैले मानिस स्वस्थ रहनका लागी सफा वातावरण र स्वच्छ पानीको आवश्यक छ । यस्ता विभिन्न क्रियाकलापहरु आर्थिक विकासको आधारहरु हुन सक्छन । दिगो विकासको लक्ष्यको ६ नम्बरमा सबैका लागी स्वच्छ पानी र सरसफाईको उपलब्धता दिगो ब्यवस्थापन सुनिश्चित गर्ने रहेको छ ।
कुनै पनि देशको आर्थिक विकास भनेको त्यस देशको नगरिकको जिवनस्तरमा भएको परिवर्तन र देशका विकासको पुर्वधारहरुको दिगोपनालाई बुझने गरिन्छ । देशको आर्थिक सशक्तिकरणमा त्यस देशका जनताको ठुलो भुमिका रहेको हुन्छ । त्यसैले त मानव विकास सुचक र प्रतिव्यक्ति आयले देशको आर्थिक विकासलाई हेर्न सकिन्छ । दिगो आर्थिक विकासको लक्ष्य पुरा गर्नका लागी पर्यटन क्षेत्रको विकास हुनु पर्छ भने पर्यटन क्षेत्रको विकासको आधार भनेको सरसफाई र स्वच्छता हो ।
यसरी विभिन्न काम गर्ने शिलशिलामा एकीकृत जलस्रोत कार्यक्रम हेल्भेटास नेपालको तर्फबाट म एक महिनाको लागि दैलेख, सुर्खेत ,अछाम र कालीकोट जिल्लामा जाने कार्यक्रम थियो । उक्त कार्यक्रम अनुसार २०७६ साल भाद्र १६ गते पाँच जना नेपाली र एक जना स्वीजरल्याण्डको गरी जनाको टोली अछाम जिल्लाको कमलबजार नगरपालिकामा गएका थियौ । त्यहाँ निश्चित ५÷६ ओटा खानेपानी योजनाको पानीको जैविक गुणस्तर परिक्षण गर्ने कार्यक्रम रहेको थियो । झन्डै १० दिनकोको बसाईमा विदेशी साथीसंग धेरै कुराकानी भए । २०७६ भाद्र १९ गतेका दिन विहान उदाउँदै गरेको घामामा बिदेशी साथी करोलाले कमलबजारको माथितिर गएर फोटा खिच्ने इच्छा ब्यक्त गरिन् । उनले म संग सहयोग मागे पछि म र उनि त्यो डाँडाको ढुङगामा गएर फोटा खिचेर झर्दै गर्दा त्यँहा एक ठाउँमा फोहोर यत्रयत्र फालीएको थियो । उनले त्यसको फोटा खिचिन् । हामी त्यहाँबाट आयौ ।
यसरी अछामको काम सकेर कालीकोट हुँदै दैलेखमा पनि त्यसै कार्यक्रममा सहभागी हुँदै आयौँ । एक दिन दुल्लु नगरपालिकाको वडा नम्बर ३ को पाली भन्ने ठाउँमा पानीको गुणस्तर मापन गरेर फर्कदै गर्दा उनै करोलाले मसँग कुरा गर्दै आइन र उनले भनिन । नेपाल प्राकृतिक दृष्टिले धेरै राम्रो छ । स्वीजरल्याण्ड र यहाँको हावा पानी पनि मिल्दो जुल्दो छ । नेपाल स्वीजरल्याण्ड भन्दा पनि सुन्दर छ । यहाँको सबै कुरा राम्रो छ तर एउटै कुराले यहाँ नराम्रो छ त्यो फोहोर व्यवस्थापन । सबै कुराले राम्रो हुदाँहुुदै पनि फोहोर जथाभावी फालेको कारणले नराम्रो देखिएको छ । उनले यसमा थप्दै भनिन । मैले २ बर्ष पहिलाको भन्दा त परक पाएँ तर सुर्खेत दैलेख, अछाम, कालीकोट कुनै न कुनै ठाँउ फोहोर देखिन् । उनको यो भनाईले मेरो मनमा एउटा पश्न उब्जियो, साच्चिकै फोहोरको कारणले हामी पछि प¥यौ त ? एकातिर यो प्रश्नले मन खिन्न बनायो भने अर्को तिर फोहोर के देश पछाडी पर्छ त ? जस्ता कुराले मन खेल्दै गयो ।
सफा कपडामा एक ठाँउको सानो दागले पुरै कपडा नै । फोहोर देखेर अर्को कपडा लगाउने हामी किन हाम्रो घर आँगन र वातावरणमा भएको फोहोर लाई सफा नगर्ने । सेतो सटमा थोरै लागेको कालो रङले पुरै सट बिगारे झै । हाम्रो सफा वातवरण र प्राकृतिक सुन्दरता भएको देशमा कतै सरसफाई र स्वच्छताले कालो बनाएको त छनै ? यसमा हामीले सोच्न जरुरी छ । दुई महिनाको लागी नेपाल आएको एक जना बिदेशीले हाम्रो फोहोरको बारेमा कुरा गर्दा हाम्रो भ्रमण वर्ष २०२० को अवस्था कस्तो रहन सक्छ । यस्ता विभिन्न प्रश्नहरुका साथ मैले कार्यक्रमसंगै अध्ययन गरी रहेको थिए ।
यसको लगतै सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) नेपालबाट दुल्लु नगरपालिकामा काम गर्ने अवसर पाईयो । दुल्लु नगरपालीका वडा नम्बर ११ मा रहेको सामुदायिक लाफा होमस्टेमा २०७६ फागुन ५ गते नेवा संस्थाको समुहले त्यही होमस्टेमा बस्ने योजना बनाईएको थियो । उक्त योजना अनुसार हामी त्यँहा बास बसेर बिहान छलफल गर्ने कार्यक्रम थियो । किन कि त्यो होमस्टेको लागी खाने पानी सोसेकको सहजिकरणमा हेल्भेटास नेपाल र दुल्लु नगरपालिकाको साझेदारीमा सञ्चालन थियो । छलफलको क्रममा एक जना दिदिले भन्नु भयो हाम्रोमा पहिलेको भन्दा अहिले धेरै मान्छे आउँछन् किन कि पहिले पानी पनि टाढा थियो । बोकेर ल्याउनु पथ्र्यो र सरसफाईमा पनि हाम्रो त्यति राम्रो थियन । तर अहिले सरसफाईका कारणले पाउनाहरु प्राय कुनै दिन पनि खाली छैन ।
हो यी दिदिले बोलेको कुरा र मेरो बिदेशी साथीले भनेको कुरालाई बिश्लेषण गर्ने हो भने सरसफाई आर्थिक विकास र व्यवसाय, र पर्यटनको मुख्य आधारको रुपमा रहेको देखिन्छ । जहाँ सफा र स्वच्छ खानेपानी तथा वातावरण हुन्छ त्यहाँ नै मानिसहरु बढी रमाउने गर्छन । र, पो पर्यटनको विकास र विस्तार हुने गर्छ । मानिसलाई स्वस्थ्यको लागी मात्र नभई आयआर्जनको माध्यमका रुपमा पनि सरसफाई जरुरी रहेको छ ।
यसरी सरसफाई र स्वच्छताले व्यक्ति, समाज र देशको सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा टेवा पु¥याउँछ भने पर्यटन क्षेत्रको आधार हुन्छ । सुचना नै पर्यटनको महत्वपुर्ण आधार हो । जाहाँ सफा सुग्गर देखिन्छ त्यहाँ मान्छेको आर्कषण बढ्ने गर्छ । त्यसैले भ्रमण बर्ष २०२० लाई सफल बनाउन पनि सरसफाईको महत्व रहेको देखिन्छ । त्यसैले सरसफाई आर्थिक विकासको आधार हो भने पर्यटनको पुर्वधार हो । जसरी विकासको पुर्वाधारमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, विद्युत खानेपानी हो त्यसरी नै पर्यटन विकासको पुर्वाधारमा सरसफाई हो ।